I-Cottage kwindawo ebukekayo - I-Airbnb
I-Cottage kwindawo ebukekayo
Signaldalen, Troms, Norway
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguKirsten Josefine
UKirsten Josefine yi-Superhost
Indlu yamaplanga ifumaneka eSignaldalen malunga neekhilomitha eziyi-110 ukusuka kwisixeko saseTromsø. Umlambo iSignadalselva, ojikelezwe ziintaba eziphakamileyo nendalo enamandla. Kukho umgama omfutshane ukuya entabeni ephakamileyo yokutyibiliza ekhephini/ukunyuka intaba/ukunyuka intaba/ukuzingela kunye nokuzonwabisa ngezibane zasemantla. Kukho nendawo yokudlala i-scooter ebusika. Indlu yamaplanga inombane, amanzi aphumayo nesauna. Kuqukwe ilinen yebhedi neetawuli Kukho ikhitshi elinesitovu, i-microwave, i-toaster neketile. Ivenkile ekufutshane (iHatteng) kunye nebhari yentselo ekwiikhilomitha eziyi-6 ukusuka kwindlu yamaplanga.
Intlambo yesignali yintlambo ejikelezwe ziintaba eziphakamileyo. Kukho amathuba akhethekileyo okunyuka intaba kubantwana nabantu abadala, ehlotyeni nasebusika. Iinyanga zasehlotyeni zineendlela ezintle zokunyuka intaba eParasdalen naseStordalen kwicala laseFinland naseSweden (treriksrøysa). Umbutho Wezokhenketho ukwanazo nezindlu zamaplanga ezingasebenziyo kwezi ndawo (iGappo, iGolda). Iinyanga zasebusika zinamathuba okunyuka intaba kwabo bayifunayo, kunye namathambeka e-scooter. Kukho namathuba amahle kakhulu ezibane zasenyakatho, njengoko kukho "ungcoliseko oluncinci" entlanjeni. Kukho iinkumbulo ezininzi zakudala zemfazwe kule ndawo kwabo banomdla kule nto.
I-Steindalsbreen ikude ngeekhilomitha eziyi-31, i-Lyngsaplan iikhilomitha eziyi-56, i-Tamokdalen iikhilomitha eziyi-38 ne-Kilpisjärvi (iikhilomitha eziyi-81).
4.93 · Izimvo eziyi-121
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi121
Indlu yamaplanga ikwizindlu ezimbini ezikufutshane. Azikho izibane ezenziweyo ezichaphazela izinto onokuzonwabela kwizibane zasenyakatho kunye nesibhakabhaka esineenkwenkwezi. Indawo entle phakathi kwezi ntaba ziphakamileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Kirsten Josefine
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Signaldalen